Garoowe: Arday Ku Guulaystay Tartanka Quraanka oo Gaari la Guddoonsiiyay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Garoowe: Arday Ku Guulaystay Tartanka Quraanka oo Gaari la Guddoonsiiyay
Garoowe: Arday Ku Guulaystay Tartanka Quraanka oo Gaari la Guddoonsiiyay
May 25, 2019 - By: HORSEED STAFF
Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa soo xiray tartanka Qur’aanka Kariimka ah, kaas oo loo qabtay arday ka socday gobolada Puntland.
Xafladdii xiritaanka oo ka dhacdey Masjidka weyn ee Al-Huda Garoowe waxaa Madaxweyne ku xigeenka ku wehlinayey Wasiirka Caddaaladda Cawil Shiikh Xaamud, Culimaa’udiin Ardeydii ka qayb-qaadatay tartanka iyo dadweyne kale.
15 degmo ayaa sanadkan ka qayb qaadanayay waxaana kaalinta kowaad ee 30-ka Jus ku guulaystay Maxamed Faysal Maxamuud oo ka socday magaalada Garoowe. kaalinta labaad waxaa galay Cabdisalaan Cabdi Maxamed oo ka socdey Qardho, halka kaalinta Sadexaadna uu ku guulaystay Cabdullaahi Bashiir Maxamed oo ka socday magaalada Bosaso.
Madaxweyne ku-xigeenka Dowladda Puntland Mudane Axmed Cismaan Karaash ayaa ku amaanay waalidka dhalay caruurta ka qayb qaadatay tartanka iyo macalimiinta wax soo baray sida wanaagsan ee ay usoo gacan qabteen una soo barbaariyeen, taas oo uu ku tilmaamay inay qof walba farxad galinayso.
Ugu danbayn Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan guddoonsiiyay ardaydii Kaalimaha hore ka galay tartankan, kuwaas oo uu ka mid ahaa Maxamed Faysal Maxamuud oo Madaxweynuhu uu ku wareejiyay furaha gaari nooca NOAH-da loo yaqaano oo uu abaalmarin u helay, kadib guushiisii.